China Soft Silicone Soft Training Skin ho an'ny vatana Art Art Blangko feno fanao amin'ny tatoazy amin'ny famokarana hoditra sy ny orinasa | MOLONG
Tena silika, malefaka ary mora loko, hatevin'ny 0.3cm,
Fitaovana mora azo, volon-koditra, fitaovana tsara ho an'ny vao manomboka.
Manahaka ireo toetra mampiavaka ny hoditry ny olombelona,
Izy io dia vita amin'ny fitaovana manokana izay akaiky indrindra ny volon'olombelona, ​​ary ny endriny dia malefaka sy matevina manakaiky ny hoditry ny olombelona.
Izy io no fitaovana fampiasa tsara indrindra ho an'ny vao manomboka alohan'ny tena fandidiana.
(Nilaza ny mpianatra sasany fa mora maloto ilay hoditra fanao.
Ity misy fomba tsara ho anao, hadio izy rehefa avy namafa amin'ny Vaseline)
Anarana: hoditra fanazaran-tena feno
Fitaovana: Silimo fiarovana voalohany tontolo iainana
Haben'ny fijanonana: 50 * 40 * 0.3cm
Milanja: 0,6 kg
Manararaotra indrindra amin'ny hoditra fanazaran-tenanao
Rehefa mampiasa ny hoditra fanazaran-tenao dia miezaha mitadidy fa ity dia fotoana tsara hanadinana ny asanao ho tetikasa matotra - manazatra hoditra na tsia! Raha vaovao amin'ny tontolon'ny fanaovana tatoazy ianao dia alao antoka fa mandinika ny antsipiriany kely rehetra ianao, toy ny hitanao amin'ny tena zavatra. Diniho ny tontolo iainana sy ny faritra iasanao, andramo ary atodiho raha toa ianao ka nandray fepetra tokony hitandremana momba ny fahadiovana na tsia.
Zava-dehibe ny mifantoka amin'ny sehatry ny asanao sy ny fepetra momba ny fahadiovanao. Alohan'ny hanombohanao mitantana fanjaitra na ranomainty dia tokony hodinihinao ny fahadiovan'ny faritra ampiasainao. Manana fomba fanariana fanjaitra soa aman-tsara ve ianao? Ahoana no hitantanana ny fitaovanao? Ireo dia lafiny manandanja rehetra izay mila hofakafakaina rehefa ny fanaovana kibay sy ny paosy ary ny fampiharana hoditra no fotoana mety indrindra hamerenana ireo fepetra ireo.
Fanandramana amin'ny haben'ny fanjaitra isan-karazany
Ny fanjaitra tatoazy rehetra dia misy habe maro samihafa, samy hafa amin'ny fomba hafa. Ny fampiasana hoditra fanazaran-tena amin'ny tatoazy dia ahafahanao manandrana karazana haben'ny fanjaitra ary noho izany dia ahafahanao mahazo fahatsapana izay mety hoheverinao fa mety hampiasaina amin'ny tena tehina sy ny paoka. Ny hevitra tsara dia ny fampiasana ny hoditra fanazaran-tena hamoronana karazana tabilao mba hahafahanao mampitaha ny teboka sy ny hatevin'ny tsipika izay noforonin'ny habe tsirairay.
Previous: Hamafa toro-hevitra sterilized 108mm Miaraka amin'ny Grip Atsaharo ny toro-hevitra momba ny tatoazy maharitra ela azo ampiasaina amin'ny fanjaitra tatoazy
Manaraka: HELLO II Penina Tatoa bateria Lithium
3D loha tarehy tarehy 3D Microblading maharitra Mak ...
20cm * 30cm hoditra fanazaran-tena tsy mahomby ho an'ny mak ...